ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် GIZ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် GIZ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ဂျာမနီနိုင်ငံ အခြေစိုက် GIZ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အဆောင်အမှတ် (I-7) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
ရှေးဦးစွာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ဘဏ်ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အသိပညာဖလှယ်မှု တစ်ရပ်အနေဖြင့် GIZ အဖွဲ့အစည်း၏ Professor. Dr. Eckart Koch က ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းစနစ် (Exchange Rates and Exchange Rates System) အားလည်းကောင်း၊ Dr. Rudiger Schafer က မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းအတွက် မူဝါဒ အကြံပြုချက်များကို အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများအား လည်းကောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ သိလိုသည်များကိုမေးမြန်းကြရာ GIZ အဖွဲ့အစည်းမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၄င်းအစည်းအဝေးကို ၁၅.၁၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနိုင်နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်းသည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆွီဒင်သံရုံးမှ သံမှူးကြီး Mr.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်လင်း ME Farms Myanmar Co.,Ltd အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Patrick Chugg ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဝင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Mr. Kevin Chang နှင့် UNDP ၏ စီမံကိန်းကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နွေးနွေးလွင်တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်လင်း Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Sir. Hugh Bayley အား လက်ခံတွေ့ဆုံ